कांग्रेसका नेताहरुलाई खुला पत्र
२ पुष २०७५, सोमबार ०९:४९
कांग्रेस आओस् वा जाओस्, मतलब भएन । तर, कम्युनिस्टहरुले राम्रो काम गरिदिए हुन्थ्यो, यो अपेक्षा मेरो अनि सम्पूर्ण नेपाली जनताको हो । कांग्रेस र कम्युनिष्ट मिलेर बनाएको फोहोरलाई अबको नेकपाले सफा गर्नैपर्छ । यसबाट तात्कालीन एमाले पनि अछुतो छैन । तत्कालीन एमाले चोखिने र सुध्रिने मौका यही हो ।
कम्युनिस्टहरुले एउटा चुनाव जितेर सरकार चलाएको ६ महिनादेखि नै प्रजातान्त्रिक रुवाई सुरु गरेको कांग्रेसले आफूहरुले ३ पटक चुनाव जिते देश समृद्धि हुने भनेर ठोकुवा गरेका रहेछन् । यिनीहरूलाई लाजसरम भन्ने कुनै चिज पनि छ कि भनेर सोध्नु पर्यो बाबा ठाकुर । कांग्रेसले २००७ साल यता कति पटक चुनाव जिते, कतिपटक बहुमतसहित सरकारमा गए र देशका कलकारखानाहरु कति ओटा बेचेर खाए ? त्यो नेपाली जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ ।
नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा धेरै राज्यसत्ता चलाएर देशलाई समृद्धि बनाएर देशमा भएको कलकारखाना उद्योग यातायातलाई निजीकरणको नाममा बेचेर खाएर अहिले हामी जस्तो युवाहरूलाई खाडीमा ५० डिग्रीको तापक्रममा रगत पसिना बगाउन बाध्य बनाएको छ । अझै भन्दैछन्, हामी नेपाललाई समृद्ध बनाउछौं । लाज पनि लाग्दैन ? २००७ सालदेखि अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै सत्तामा बसेर भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातबाहेक अरु केही गर्न नसकेको पार्टी कांग्रेस नै हो ।
वर्तमान प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका केही नेताहरूको भनाइअनुसार वाम सरकारले एक वर्षमै नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाइदिनुपथ्र्यो । तर, विकास योजनामा हुन्छ, जादुमा हुँदैन । अनि उनीहरूले सत्ताको नेतृत्व पाउने हो भने देशले काँचुलीसमेत फेर्ने दावी गर्दैछन् । कट्टर काङ्ग्रेसी युवाहरूले आफूलाई कांग्रेस भन्न छोडेर स्वतन्त्र र स्वतन्त्र बौद्धिक वर्ग किन भनी रहन्छन् होला ? अहिलेसम्म बुझ्नै नसकेको यही हो । पार्टीका ब्यक्ति गलत हुन्, पार्टी र पार्टीको सिद्धान्त गलत होइन भनेर मनन गर्नुस्, पार्टीका गलत ब्यक्ति र गलत प्रवृत्तिको खुलेर बिरोध गर्नुस् र पार्टीलाई सही दिशामा लान दवाव दिनुस् । छाती पिटेर कांग्रेस पार्टीको मान्छे हुँ अथवा कांग्रेस पार्टीको सिद्धान्तनिष्ठ हुँ भनेर भन्नुस् ।
भयावह बेथिति अनि भ्रष्ट नीतिको बारेमा नबोलेर चौबीसै घण्टा बामे सरकारलाई गाली गर्दै गलत अफवाह फैलाउने काम बन्द गर्नुस् । २०१५, २०४८ र २०५६ चाहिँ देशमा जितेको कतिवटा सरकार कुन पार्टीको थियो ? कतिवटा सिङ्गापुर बनाउनुभयो ? बिचरा, सत्ताको भोकले अत्तालिएर दिउसै बर्बराउन थाल्नुभयो । अझै पनि नेपाली जनतालाई झुक्याउने दुस्साहस ? सिङ्गापुर बनाइदिनुपर्यो भनेर गीरिजालाई पीण्डसँगै पत्र पठाउनुस्, अनि गीरिजाले आफ्नी पुत्री सुजाता जोष्टलाई प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रदान गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि सुजाताले आफ्ना ज्वाइँ बङ्गालीलाई सिङ्गापुर बनाउने ठेक्का दिनेछिन् । अनि, त पक्का बन्छ सिङ्गापुर ।
कांग्रेसलाई १५ वर्ष चाहिने तर त्यही काम वामपन्थीले ५ महिनामै गर्नुपर्ने ? २०१५ सालदेखि तपाईहरुले राष्टिय उद्योगहरु कति बेच्नुभयो ? त्यसको हेक्का पक्कै होला । जनताले तपाईहरुको सरकार हेरेकै हुन्, पटकपटक बहुमत दिएकै हुन् । तर, जनताको सम्मान गर्न सक्नुभएन । देशका राष्टिय सम्पदा र स्रोतहरु कौडीको मूल्यमा बेच्नुभयो । त्यसको हिसाब जनताले भुलिसकेका छैनन् ।
नेकपाको सरकारले पूरै राम्रो गर्यो भन्ने मेरो दावी होइन । तर, कांग्रेसको सरकारले भन्दा निकै राम्रो चाहिँ गरेको छ । हिजो राजनीतिक सङ्घर्षको जमाना थियो, कांग्रेस र कम्युनिष्ट सिद्धान्तको बहस गर्थे र जनतासँग मत माग्थे । अब त्यो परिस्थिति छैन । अब हामी सबैको साझा एजेण्डा छ समृद्धि । यसका लागि राष्टिय एकता र संकल्प चाहिन्छ, विकासका मुद्दामा सहकार्य र साथ चाहिन्छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारप्रति नागरिकका बेलगाम अपेक्षा छन् । तर, राज्यको सामर्थ्य त्यसभन्दा पृथक छ । सरकारले रणनीतिक काम गरिरहेको छ, त्यो प्रतिफल देखिन समय लाग्छ । तपाईहरुले यत्रो वर्ष शासन गर्नुभयो, पाँच वर्ष धैर्यतापूर्वक कम्युनिष्टहरुको शासन हेर्दा के बिग्रन्छ ? राम्रो–नराम्रो अर्को निर्वाचनमा जनताले नै फैसला गर्छन्, त्यतातिर सोच्ने कि ? तसर्थ, आदरणीय नेतागण सरकारलाई गाली गर्नुपूर्व आफ्नै विगतबारे ठण्डा दिमागले आत्मसमीक्षा गर्नुस् ।
गल्याङ नगरपालिका–४ कुरुम्चे, स्याङ्जा
हालः युएई, दुबई ।